Jeri jamming system
Yemukati Musangano Kamuri Cell Runhare Jammer
Yakadzika Frequency Radio Signal Jammer
Ruoko-rwakabata Signal Jammer
Mvura isina mvura UAV Drone Jammer
Inotakurika Yakasimba Bhomba Chiratidzo Jamming Sisitimu
Kamuri Yekusangana Nhare mbozha Jamming Solutions
Yakakwira Simba Jeri Jamming Solution
Yakazara Band Yakakwira simba Mota Jamming System
HiSea Cell Phone Signal Jamming Solution yeVIP muHurumende yeHurumende yeJorodhani. Mugore ra2011, nekuda kwekuedza kwevatengi vedu, nemhinduro yedu yehunyanzvi, vakabudirira kuhwina bhidhi: Chiratidzo chefoni mbozha Jamming sisitimu yekuvakwa kwepasi nhanhatu dzinoratidzira girazi curtainwall, wh ...
HiSea High powe Jammer Solution muPanama La Jolieta jeri Mugore 2013, HiSea vane rukudzo rwekupa mhinduro mutorongo wePanama La Jolieta. Solution mbiri: Yakaiswa ine matatu seti akazara mabhendi makuru emagetsi chiratidzo jammer, jammer yese yakaungana (ine Gap).
HiSea Signal Jammer Solution kuKenya Mauto Mota Mugore 2012, yakabatana nevatengi vedu, kubudirira kuve mutengesi wemweya weKenya Mauto. Imwe yeprojekti yakabatana, mu-mota / mota yakamisikidzwa chiratidzo jammer iyo yaida kuputika-chiratidzo. Solution mbiri: Yakaiswa ine maviri seti ...